Paseky nad Jizerou z výšky - Ngwudata egwu na mgbasa ozi maka vidiyo vidio YouTube ma ọ bụ ọrụ multimedia
HomeugwuPaseky nad Jizerou si n'elu
Paseky nad Jizerou si n'elu	Hapụ ikwu
ugwu, video	 7.4.2018
Paseky nad Jizerou lee site na elu nke 06.04.2018. Paseky nad Jizerou bụ ugwu obodo nta dị na Semily District na Liberec region, n'ebe ọdịda anyanwụ Giant Mountains na ókè-ala nke Jizera n'akụkụ aka nri Jizerský m. Ndị bi na 252 bi ebe a; ọtụtụ ụlọ na ụlọ ndị ọzọ na-eje ozi taa maka ezumike ezumike. The n'ebe ugwu nke obodo bụ nke Giant Mountains National Park, gụnyere akụkụ ebe ndịda nke isi residential nkeji na PLA Giant Ugwu. O nwere ike ịbụ obodo a na 16. Otú ọ dị, ihe ndekọ mbụ sitere na 1654. Ihe odide kasị ochie akụkụ bụ Makov ebe ha n'oge ahụ glassworks, na Havírna ebe silver e mined. N'ime oge ahụ, alaghachi azụ ọhịa nso mmadụ ọrụ na ọhụrụ clearings pụtara ọzọ n'ụlọ onye bi ndị na-akpa ákwà na ọtụtụ mgbe. Nkume ndị sitere na ebe ndị a na-egbutu osisi na-etinye uche n'osisi taa.
E wuru chọọchị na 1789, a malitekwara ịga akwụkwọ na Paseky na 1791. The obodo akwụkwọ kụziiri mba revivalists, cantor Josef Simunek na-enyere ya aka Věnceslav Metelka onye bara ọgaranya initiators nke music, nkiri, edemede na izugbe omenala ndụ nke obodo. Věnceslav Metelka dị ka ihe autodidact zụrụ violin onye na tọrọ ntọala nna nna violin-eme omenala, site na nke ahụ pụta na-akpọ Giant violin akwụkwọ, ma na-ebi n'ụwa na genera Pilar Špidlen na Vedral. Mgbe Agha Ụwa nke Abụọ n'oge animated musical omenala Pasecký violin nkụzi František Vedral, ma mbubreyo fifties gbalaga na-amu amu ihe nkiri okụrede. N'afọ 1970 nke 20. narị afọ gara aga n'obodo nta na chọọchị St. Vaclav Pater MUDr. Ladislav Kubíček. Na 1980 e tọrọ ntọala site na Church of St Wenceslas Choral Society ukwe, nke ugbu a nwere n'elu 30 òtù kemgbe 1990 Paseky kwa afọ na-ahazi music ememme; ndi ozo choro na-eme ka ndi oka egwu di egwu.
Obodo nta bụ akwụkwọ nke Karel Vaclav Raise Zapadlí patnáci hụrụ. E debere atụmatụ ya na 40. ụgbọ elu 19. otu narị afọ, a kpọkwara Paseky aha Pozdětin, Ụdị na-adọrọ uche ya na ihe ndekọ nke Metel, ọrụ dị egwu nke egwu ndị mmadụ.
N'obodo ahụ, e nwere osisi FUZNER sro, onye na-emepụta kaadiboodu na nkwakọba akwụkwọ cardboard EMBA sro na ogige atụrụ Bell Tower.
A na-arara akụkọ ihe mere eme ahụ na Museum nke Zapadly ndị agbata obi na ụlọ nke ụka mbụ, na-esote St. Wenceslas Church na n'ihu ụlọ oriri na ọṅụṅụ Na Buďárce. A na-arara ihe ngosi nka maka ọrụ nke onye violin na onye edemede Věnceslav Metelka yana onye edemede bụ Karl Vaclav Rais, ndụ nke ugwu nta dị na 19. narị afọ, violin na ịkwa ákwà. Emere ncheta ahụ na 1958 na ụlọ ime ụlọ nke ụlọ ụka, afọ 1975 ka emere ka ọ rụzie dị ka PhDr dị. Jaromir Jech, onye ọkachamara na onye nkwusa nke ọrụ Metelka. E mere ka 1978 gaa n'ala elu. Ụlọ ihe ngosi nka dị ugbu a n'okpuru nlekọta nke National Park nke Krkonoše.
Obodo ahụ nwere ọtụtụ ebe obibi na ọtụtụ ugwu ugwu na-agbasapụ n'elu ugwu. Obodo dum gụnyere otu mpaghara mpaghara. A na-edebanye aha na nhazi ọnụ ọgụgụ na mpaghara atọ: Paseky nad Jizerou, Havírna na Makov. Havírna warara mmezi na ndagwurugwu Havírenského enuba ndịda n'elu Hromovka ugwu n'elu Mechovice (803 m), ma ndị mejupụtara residential saịtị dị ka ugwu, Piave, Lomička, nkụ wdg Makov mmezi ke akụkụ ebe ndịda nke obodo na ndagwurugwu Makovského potoka. Northwest akụkụ nke obodo, ya na ọtụtụ skai lifts na mkpọda, a na-akpọ Hořensko, a ìgwè nke ụlọ n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke ugwu Javorníka (822 m) na-akpọ Tomšová. Mgbe ụzọ nso Tomšová guzo oge ochie ụlọ mmanya ma ọ bụ na chaplet Prdku. The obodo na-agụnye a n'ọhịa ebe (ukwuu n'ime spruce ọhịa) n'ebe ugwu nke na Ngwuputa, na ugwu nta Hromovka (916 m) White Rock (nso n'elu 957 m, na saịtị nke obodo enye 964 m) na Kapradník (910 m) na mmezi E weere ha na ndagwurugwu Jizera. The kasị ala mgbe nke obodo bụ larịị Jizera 476 m
Obodo bụ n'akụkụ ọdịda anyanwụ na municipalities Zlata Olesnice na mgbọrọgwụ (k. Ụ. Rejdice, Dul na Polubný) edere ebe nke obodo Jizerou Harrachov, n'Iru-anyanwu na ókèala Jizerou Rokytnice (Dolní Rokytnice), n'ebe ndịda na ókèala obodo Vysoké nad Jizerou (dị nso Sklenařice) na obodo ahụ Jablonec nad Jizerou.
← CMS Gburugburu, WordPress, WooCommerce, Drupal, Joomla, Magento, Blogger, PrestaShop, HTML, OpenCart, VirtueMart